Benadryl वजन: एलर्जी औषधि तपाईं वजन बनाउन सक्छन्? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार चेकआउट खेलहरु कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी समुदाय प्रेस कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के तपाईको एलर्जी औषधिले तपाईलाई वजन बढाइरहेको छ?
धेरै व्यक्तिहरू परिचित छन् एन्टीहिस्टामाइन्स , औषधी जुन सामान्यतया एलर्जीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। लक्षण परागबाट धुलोकोट सम्म, प्वाँख वा खानामा कुनै पनि चीजले हुन सक्छ। एन्टीहिस्टामाइन्स एक उपयोगी ओभर-द-काउन्टर उपचार हो जुन तपाईको एलर्जी प्रतिक्रिया कम गर्न मद्दत गर्दछ।
एन्टीहिस्टामाइन्सले हिस्टामाइन्सलाई ब्लक गरेर काम गर्दछ, जुन तपाईंको शरीरको एक एलर्जेनको इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियाहरू द्वारा ट्रिगर गरिएको रसायन हो। यदि तपाईंको एलर्जी विशेष गरी गम्भीर छ भने, एक एलर्जी शट सट्टामा प्रयोग हुन सक्छ। जे भए पनि, दुबै उपचार कोर्सले शरीरमा हिस्टामाइन्सका साइड इफेक्टहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ — जसमा सुन्निने, छींकने, खुजली गर्ने, वा पित्तीहरू सम्मिलित हुन सक्छ।
जे होस्, केही एन्टीहिस्टामाइन्ससँग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरूमध्ये एक तौल वृद्धि हो, र केही बिरामीहरूले उनीहरूले एन्टिहिस्टामाइन्स रोकेपछि वजन घटाउन पनि सुझाव दिएका छन्। एन्टिहिस्टामाइन वजनको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरा यहाँ छ।
टनिक पानी झूठी सकारात्मक औषधि परीक्षण कारण हुन सक्छ
एन्टीहिस्टामाइन्सले किन तौल बढाउँदछ?
एलर्जीको उपचार गर्न कहिलेकाँही एन्टीहिस्टामाइन्सको प्रयोगले कुनै व्यक्तिको वजनलाई असर गर्ने सम्भावना हुँदैन, अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि केही एन्टिहिस्टामाइन्सको निरन्तर प्रयोगले तौल र मोटापामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
उदाहरण को लागी, एक २०१० को अध्ययन येल युनिभर्सिटीका अन्वेषकहरूद्वारा गरिएको अनुसन्धानले एच १ एन्टिहिस्टामाइनको प्रयोग र १ of बर्ष भन्दा माथिका अमेरिकी वयस्कहरूमा मोटोपनाको बढेको जोखिमको बीचको सम्बन्ध भेट्टायो। यसै बीचमा, २०२० रिपोर्ट एन्टीहिस्टामाइन्सले हिस्पानिक बच्चाहरूमा पार्ने प्रभावमा पत्ता लगाए कि धेरै जसो सहभागीहरूले यस औषधीको लामो सेवनको कारण मोटापा र मेटाबोलिक सिन्ड्रोम विकास गरेको हुन सक्छ।
एक रासायनिक रूपमा हिस्टामाइनले यसको मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष प्रभावले केही हदसम्म भोकको भावना कम गर्छ, भन्छ जावेद सिद्दीकी , MD, MPH, TeleMed2U's का मुख्य चिकित्सा अधिकारीविशेषता क्लिनिक। यसको विपरित, एन्टिहिस्टामाइन, हिस्टामाइन्स ब्लक गरेर, त्यसपछि दिमागमा यस 'मेसेजिंग' को साथ हस्तक्षेप गर्दछ।
डा। सिद्दिकी अझै जारी राख्छन्, थप रूपमा, एन्टिहिस्टामाइन्सले सुन्द्रा ल्याउन सक्छ, जसले गतिविधि स्तर घटाउन सक्छ। त्यस्तै, तौल र एन्टीहिस्टामाइन्समा प्रभाव बहुप्याक्टोरियल हुन सक्छ, धेरै खाए र गतिविधि कम भयो।
मोर्गिन क्लेयर, एक रेजिष्टर डाईटियन पोषण विशेषज्ञ स्प्रिन्ट भान्छा भन्छन्, जबकि एन्टिहिस्टामाइन्सको तीव्र वा छोटो अवधिको प्रयोगले वजन बढाउँदैन, दीर्घकालीन प्रयोगले भोक बढाउन र तौल परिवर्तन गर्न सक्छ। यो वजन बढि सम्भवतः औषधीले हिस्टामाइनमा पार्ने प्रभावसँग सम्बन्धित छ। हिस्टामाइन्सले भोक कम गर्छ; जब यी औषधीहरू प्रयोग गर्छन्, भोकमरी बढ्न सक्दछ, समयको साथ वजन बढाउन।
कुन एन्टीहिस्टामाइन्स वजनको साथ जोडिएको छ?
Antihistamine वजन एक विषय हो जसलाई थप अनुसन्धान आवश्यक पर्दछ। यद्यपि, अध्ययनहरूले सुझाव दिएका छन कि केहि एन्टीहिस्टामाइन औषधीहरूले अन्य भन्दा वजन बढाउन सक्छ।
येल विश्वविद्यालयको २०१० अवलोकन मोटापा अध्ययन पत्ता लगायो कि त्यहाँ को उपयोगको बीच एक सम्बन्ध छ एल्लेग्रा (फेक्सोफेनाडाइन) र Zyrtec (cetirizine) र तौल लाभ।
बेनाड्रिल (diphenhydramine) पनि भएको छ वजन बढाइमा जोडिएको केही बिरामीहरूमा।
यद्यपि नयाँ एन्टीहिस्टामाइन्सहरू जस्तै क्लेरटिन (लोराटाडाइन) माथिका एन्टिहिस्टामाइन्सको तुलनामा कम वजनसँग सम्बन्धित छ।
के एलर्जी शटहरूले वजन बढाउनको लागि गर्छ?
एन्टीहिस्टामाइन्सको विपरीत, एलर्जी शटहरू र तौल बढाइ जोडिएको जस्तो देखिदैन।
हामी यसको सट्टा स्पष्ट जवाफ दिन सक्छौं, डा। सिद्दीकी भन्छन्। होईन, एलर्जी शटहरू तौल बृद्धिसँग सम्बन्धित छैनन्। तिनीहरूको स्वभावले नै, एलर्जी ईन्जेक्सनहरूले एक व्यक्तिलाई पदार्थ वा पदार्थहरूको बिभिन्न मात्रामा एलर्जीको प्रतिक्रिया गराउँदछ। एलर्जी ईन्जेक्सन, वा इम्युनोथेरापी, एन्टीहिस्टामाइन्स होइन।
ibuprofen गर्भावस्था को समयमा लिन को लागी सुरक्षित छ
जब तपाइँ एन्टिहिस्टामाइन्स लिन रोक्नुहुन्छ के हुन्छ?
कुनै पनि औषधि जस्ता, तपाइँको डाक्टरसँग परामर्श लिनु महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँले यसलाई लिन रोक्नुभयो भने। एंटीहिस्टामाइन्स औषधी हो र त्यस्तो उपचार गरिनु पर्छ, डा सिद्दिकी सल्लाह दिन्छन्। यदि एक व्यक्ति एन्टीहिस्टामाइन्स दैनिक लिइरहेको छ भने, उनीहरू रोक्नु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्नु पर्छ। थप रूपमा, केहि केसहरूमा एन्टिहिस्टामाइन्स टेप गर्न अधिक उचित र अधिक सुरक्षित हुन सक्दछ भने अचानक तिनीहरूलाई लिन बन्द गर्नुहोस्।
स्वस्थ तौल कायम राख्दै
यदि तपाईं एन्टिस्टामाइन्स लिनुहुन्छ र वजन बढाउन चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यहाँ केही तरिकाहरू छन् जुन तपाईं स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्न सक्नुहुन्छ:
सन्तुलित आहार खानुहोस् , तरकारी, फलफूल, र पूरै अन्न जस्तै ताजा उत्पादनमा धनी, र प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ र चिनीमा कम। रातो मासुमा काट्ने र अस्वास्थ्यकर फ्याटहरू जस्तै ट्रान्स र संतृप्त फ्याटले तपाईंलाई स्वस्थ तौल कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले एलर्जीको लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न दैनिक एन्टीहिस्टामाइन लिनु भएको पाउनुभयो भने, तपाईंले खाँदै गरेको खानाहरूलाई विचार गर्नुहोस्। यो सम्भव छ कुनै पनि उमेरमा खाना एलर्जी विकास गर्नुहोस् ।
नियमित व्यायाम तपाईलाई स्वस्थ र बलियो रहन पनि मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाइँ बाहिर काम गर्न नयाँ हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि कडा व्यायाम रुटिन सुरू गर्नु अघि तपाईले आफ्नो डाक्टरको सल्लाह लिनुभयो।
जबकि यो स्पष्ट लाग्न सक्छ, एक पाउँदै शुभ रात्रीको निद्रा हप्ताको हरेक रात आवश्यक छ।
यदि तपाईंले यी चरणहरू लिनु भएको छ, र अझै पनि वजन घटाउन संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के तपाइँ काउन्टर मा robaxin किन्न सक्नुहुन्छ
जुन सबैभन्दा सामान्य रगतको प्रकार हो
यदि मसँग एक नुस्खा छ र एक औषधि परीक्षण असफल
xanax प्रभाव कति लामो हुन्छ?
खराब खोकी को लागी काउन्टर औषधि मा
हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिट को अर्थ के हो?